Ubomi bethu bugcwele uxinzelelo, ngoko kukho amaxesha amaninzi xa kubonakala ukuba yonke into imbi kakhulu. Ngokuqhelekileyo i-mood spoils ngenxa yezikhalazo zabasemagunyeni, iinwele ezimbi kunye nezinye izifo. Musa ukucaphukisa, ungavumeli isimo sengqondo esibi sithintele kwaye senze incembelelo kwaye ungabi nzima kwiimeko zakho ngezenzo zakho. Ukuba indlela eqhelekileyo yokuzibala ngokuzenzekelayo ukuya kwishumi ayifuni ukuzisa uncedo olufunayo, sebenzisa enye yeengcebiso ezicwangcisiweyo eziza kukukhawuleza ukukrazula ukuziphatha kakubi kunye nokuvumela ukuba udibanise kunye, ufumane ukuzinza kwangaphakathi kunye nokulingana.
Ngoko, indlela yokuzihlaziya, ukuba yonke into imbi?
Zama ukwenza i-massage. Uninzi lwezenzululwazi, iingcali ekuphumuleni, zithi kukho iindawo ezininzi ezizodwa kwimilenze yazo ezixhomekeke ngqo kwiindawo ezibalulekileyo zobuchopho. Ngoko ngomzuzu xa unomnqweno wokukrazula nokuphosa, zama ukukhipha izicathulo zakho ngakumbi kwaye wenze ukuhlalisa okuncinane nokukhawuleza. Ufanele uhlabe ngokuzenzekelayo iinzwane zakho, uze uhlaziye isikhala phakathi kwazo. Le nqubo elula kufuneka inokuthula ezo zikhupha. Ngenxa yokuphazamiseka kwemihlaba, ukukhathala nokukhathazeka? Kule meko, kufuneka uhlaziye iphoyinti, efumaneka emva kwe-tubercle ekhethekileyo, ephakathi kwenyawo. Oku kufanele kubangele ukuphuhliswa kwe-adrenaline yomzimba.
Yidla into ethile. Bambalwa abantu bayazi ukuba iphunga le-mint linempembelelo ngqo kwiingqondo zabantu. I-Mint ibhekwa njengeyona nto ibalulekileyo yokuxhatshazwa kwe-aromathrapeutic anti-depressant. Kuye kwaziwa ixesha elide ukuba iphunga elithile lichaphazela iimvakalelo zabantu. I-Mint inceda ukuziva uphumle, uzele ngokutsha kunye namandla.
Hlambisa ukucoceka kunye nokulungelelanisa kuwe. Imithetho ye-Feng Shui ithi - ukuba indawo yakho yokusebenzela igcwele udoti ohlukileyo, ngoko intloko igqitywe "ngogwayi". Ukuba yonke imihla kusasa uhlala phantsi kwindawo esebenza kuyo, ukuqala komhla wokusebenza kwanoma yimuphi umntu uya kugxininiswa, ngokungaqondi ukuba siya kuziva "kukuvalwa emsebenzini", ukungaqiniseki kwamakhono abo. Ukuhlangabezana nale nto ayiyi kuba nzima, kufuneka nje uhlale ugcina i-desktop kwi desktop, ungawahlakazeli iphepha, uze uwafake kwiifolda njalo njalo.
Mamela umculo ozolile kunye nomnandi. Wonke umntu uyazi ukuba iingoma ezithandayo ziyanqabisa umntu kwaye zimphazamise kwiingxaki zokunyanzela, kwaye zimmisele iimvakalelo ezintle. Kodwa kufuneka kukhunjulwe ukuba umculo okhawulezayo okanye onobukrakra uya kuphazamisa imeko. Khetha umculo, isisombululo esinolo mnandi ngaphezu kwemizwa yakho.
Ziphazamise izinto ezithandekayo ezingahambelani nomsebenzi. Ukuze ungavumeli ukuba isimo sengqondo esibi kukuthathe, funda ukuphazamisa ngokupheleleyo kwiingxaki ezixinzezelayo. Ngethuba elifutshane, thabatha umsebenzi ongaphandle, thabatha uhambo-kwaye iingcamango eziphazamisayo ziya kukushiya.
Yenza ukukhanya kungabonakali. Ukukhanyisa okukhanyayo akukona nje ukuqhaqhaqhaqhayisa, kunokuvelisa intloko kunye nokukhathala okugqithiseleyo kwi-exposed exposure. Ngoko ke, ukuba unethuba lokusebenza kwimihlaba yelanga, kufuneka ukhethe. Okanye unako ukuvala ukukhanya kombane ophezulu kwaye unelisekile ngokukhanya kwesibane setafile.
Yiba ngeglasi yobisi. Nje umgudu wobisi olufudumele unokuphakamisa kakhulu imihla nangona suku olubi kunabo bonke, kuba kubisi olufudumeleyo lwe-amino acid ziguqulwa zibe yi-tryptophan, ephakamisa izinga le-serotonin ebuchosheni kwaye lunefuthe lemilingo xa uziva ukhululekile kwaye ukhululekile.
Ungavumeli ukuba isimo sengqondo esibi sonakalise usuku lwakho. Indlela yokuzihlaziya, ukuba yonke into embi , sitsho, kodwa kuncike kakhulu kuwe. Smile ngaphezulu!
Ukuhlaziywa kwefilimu "Inombolo Ebulalayo"
Iipoti zezingane kunye nemilenze ngezandla zabo
Uhlanga ngenxa yamantombazana akrakra
"Ifilimu ephambili-2" iya kukhutshwa ngoJanuwari 2009
Blusher: indlela yokufaka i-blusher
Izinga langaphakathi lekwindla-2016: inxalenye eyodwa
Yiyiphi imigaqo eya kunceda ukuqinisekisa ukulala okupheleleyo
Amaqabunga kunye namazambane kwi-ukhilimu omuncu
Isipho esinobubele kumyeni wakhe
Inkcazo: isifo sikashukela esikhulelwe
I-Cosmetics yeNdalo - i-Organic Cosmetics
Lamoda kwi-Vkontakte Festival